MCU - BGR - TELES RELAY ကိုလိုက်ရန် Disney + ပွဲများကိုသင်ကြည့်ရှုရမည်ဟု Marvel ကအတည်ပြုသည်
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment MCU - BGR ကိုလိုက်ရန် Disney + ပွဲများကိုသင်ကြည့်ရမည်ဟု Marvel ကအတည်ပြုသည်
ဒစ္စနေးက Marvel စတူဒီယိုများသည်ဒစ္စနေး + အတွက်ပြပွဲအသစ်များထုတ်လုပ်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြဇာတ်ရုံများတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည့်ဇာတ်ကောင်များနှင့်သရုပ်ဆောင်များကိုပါပြသလိမ့်မည်ဟုထုတ်ဖော်ပြသသည့်အခါ Marvel ပရိသတ်များသည်လိုအပ်သည်မှာထင်ရှားသည်။ Marvel Cinematic ၏ကမ္ဘာကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးရန်ဒစ္စနေးစာရင်းသွင်းခြင်း။ နှင့်အင်တာဗျူးတွင် ဘလွန်းဘာ့ဂ် ယခုအပတ် Marvel သူဌေး Kevin Feige ကဤအချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်လာမယ့်နှစ်တွေမှာသူတို့ Marvel စတူဒီယိုတွေတည်ဆောက်မယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ပါဘူး။ Feige ၏အဆိုအရ အကယ်၍ သင်ကွင်းဆက်၌ဆက်နေလိုပါက Disney + ရှိုးပွဲများကိုကြည့်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ချေ။
ဤတွင်၏ဆောင်းပါးကနေပြည့်စုံကိုးကားသည် ဘလွန်းဘာ့ဂ် အဆုံးမှာ Feige မှတိုက်ရိုက်ကိုးကားချက်များအပါအ ၀ င်:
[Feige] သည်အစီရင်ခံစာများအပါအ ၀ င်ပရိုဂရမ်၏ဘတ်ဂျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ငြင်းဆန်သည်၊ Disney သည်အချို့အံ့ episode ဖွယ်ရာအံ့ဖွယ်ပွဲများတွင် 25 သန်းအထိသုံးစွဲသည်၊ HBO သည်နောက်ဆုံး Thrones ရာသီ၏နောက်ဆုံးရာသီတွင်သုံးစွဲခြင်းထက်ပိုသည်။ သူကသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစကျဆင်းသွားသည်။ အကယ်၍ သင်အနာဂတ် Marvel ရုပ်ရှင်များတွင်အရာအားလုံးကိုနားလည်လိုပါက၊ Disney + မှာယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ရူးသွပ်မှု၏ multiverse အတွက်ဆရာဝန် Strange ။ Scarlet Witch သည်ဒီရုပ်ရှင်၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Feige က Loki စီးရီးများနှင့်လည်းဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုထောက်ပြသည်။ “ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကအသိအမှတ်မပြုတာမသေချာဘူး။ "ဒါပေမယ့်ဒါကအမှုပါပဲ။ "
Scarlet Witch သည် Doctor Strange ၏အခန်းကဏ္inတွင်ပါ ၀ င်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်ရပ်များကို Marvel မှပထမဆုံးအကြိမ်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည် WandaVision ဒစ္စနေး + တွင်ဇာတ်လမ်းကိုပုံဖော်လိမ့်မည် အမျိုးမျိုးသောရူးသွပ်မှု ။ ထို့အပြင်ဤပြပွဲအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြားရသောအချိန်ဖြစ်သည် Loki MCU ပိုကြီးတဲ့နေရာမှာ Tom Hiddleston ရဲ့စီးရီးတွေရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေက Dr. Strange ရဲ့ခရီးကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအကြားဆက်နွယ်မှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည် WandaVision et Loki နှစ်ခုစလုံးသည် Disney + တွင် 2021 အစတွင်စတင်မည်ဖြစ်သည် ရူးသွပ်နေသည့်အမျိုးမျိုးသောဆရာဝန် ထိုနှစ်တွင်ပင် 21 မေလသာအခန်းအတွင်းဖြန့်ချိမည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: အံ့ဩခြင်းလုပ်ငန်းများ / Kobal / Shutterstock
ဘယ်အချိန်အတိအကျ Disney + အွန်လိုင်းပေါ်လာသလဲ? - BGR
ကင်မရွန်း - Maurice Kamto ကသူ၏တပ်များကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်း - JeuneAfrique.com
Bon Jovi သည်2စားသောက်ဆိုင်များကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ အစားအစာမတတ်နိုင်သောသူများသည်အခမဲ့စားကြသည် - SANTE PLUS MAG
ISS အာကာသယာဉ်မှူးများသည်သောကြာနေ့ထက်သင်ပိုမိုစိတ်ဖိစီးသော BGR ဖြစ်သည်
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,537